နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သည့် မွန်ပြည်နယ် ဒေါင်ဒင်အင်း ငါးဖမ်းပွဲတော်သို့ ယခင်နှစ်ကထက် လာရောက် ငါးဖမ - Yangon Media Group
နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သည့် မွန်ပြည်နယ် ဒေါင်ဒင်အင်း ငါးဖမ်းပွဲတော်သို့ ယခင်နှစ်ကထက် လာရောက် ငါးဖမ
မွန်ပြည်နယ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ငပုအင်းကျေးရွာရှိ ဒေါင်ဒင်အင်းတွင် ငါးဖမ်းပွဲတော်ကို တပို့တွဲလဆုတ် ၅ ရက် (ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်) နံနက် ၇ နာရီမှစတင်၍ ကျင်းပရာ မွန် ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ စီးပွားဖြစ် ငါးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ငါးဖမ်းဝါသနာရှင်များ အများအပြား လာရောက် ငါးဖမ်းယူကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဒေါင်ဒင်အင်း ငါးဖမ်းပွဲတော်သို့ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ မုဒုံ မြို့နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တို့မှ ငါးဖမ်းဝါသနာရှင်များနှင့် စီးပွားဖြစ် ငါးလုပ်ငန်းရှင်များ နှစ်စဉ် လာ ရောက်ကြပြီး ယခုနှစ်တွင် လာ ရောက်ငါးဖမ်းသူ ပိုမိုများပြား ကြောင်းသိရသည်။ ”ဒေါင်ဒင်အင်း ငါးဖမ်းပွဲတော်ကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် နှစ်စဉ်ကျင်းပတယ်။ ရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းက လုပ်လာတဲ့ ပွဲဖြစ်တယ်။ ရက်ကတော့ အတိအကျမဟုတ်ဘူး။ ဒီအင်းနဲ့ အနီးအနားရွာတွေဖြစ်တဲ့ ငပုအင်း၊ ကော့စပ်၊ ကျုံကွယ်ကျေး ရွာတွေက အလှည့်ကျ တာဝန်ယူ ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ ငါးဖမ်းပွဲ တော်ကို အင်းထဲက ရေကိုချိန်ပြီး ရက်သတ်မှတ်တယ်။ ဒီနေ့ ဒီရက်မှာ ငါးဖမ်းပွဲတော်လုပ်မယ့် အကြောင်းကို ဖိတ်စာတွေနဲ့ ကြိုတင်အကြောင်း ကြား ဖိတ်ကြားတော့ အင်းထဲကို လှေတွေနဲ့လာပြီး စင်တွေဘာတွေ ထိုးပြီး ငါးဖမ်းကြတယ်။ ဒီကနေ့ကစပြီး အင်းထဲမှာရေခန်းတဲ့အထိ ငါးဖမ်းကြတယ်။ တန်ခူးလဆိုရင် တော့ ဒီအင်းက ရေခန်းပါပြီ”ဟု ကျုံကွယ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်နိုင်က ပြောသည်။
ငါးဖမ်းပွဲတော်မလုပ်မီ ရိုးရာအစဉ်အလာဓလေ့ထုံးစံများအရ နန်းတော်ပုံ၊ ဆင်ချည်တိုင်၊ ဆင်ထိန်း နေရာနဲ့ ဆင်စွယ်ပုံများကို လုပ်ပေး ကြောင်း၊ ထူးခြားမှုမှာ အင်းထဲနှင့်နတ်စာကျွေးချိန်တွင် ငါးကြီးတစ် ကောင်ထပွက်တာမျိုးရှိကြောင်း၊ အနီးအနားကျေးရွာမှ ရွာသူ၊ ရွာသားများ အများဆုံးလာရောက် ငါးဖမ်းကြောင်း သိရသည်။
သီတဂူ ဝိပဿနာ အကယ်ဒမီအတွင်း ထားရှိမည့် နိုင်ငံစုံ ဗုဒ္ဓကြေးဆင်းတုတော် ကိုးဆူကို ဆရာတော်ကြီး ?
ပင်လယ်ဒီရေ အတက်အကျကြောင့် မြေထိန်းနံရံများ ပျက်စီးနေမှုကို ကျပ် ၂၅၉ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နေ
မန်းစည်ပင်က ချမ်းမြသာစည် လေယာဉ်ကွင်းအရှေ့ဘက်ရှိကျူးကျော်များကို ရှင်းလင်းရာတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား
ကလေးဒေသ မိုးစပါးစိုက် တောင်သူများကို စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ကျပ်သိန်း ကိုးသောင်း ငါးထောင်
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးသည် ပြည်ထောင်စု တစ်ခုလုံး၏ အရေးဖြစ်၊ အချင်းချင်း ညီညီညွတ်ညွတ် ဝိုင်းကြိ??
ကိုရီးယား အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် ပတ်ယူဆွန်းအား မူးယစ်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်မှ ၁ဝ လသို့ လျှော့ချ